Olee otú Mepụta a Ọmarịcha Movie Trailer na iMovie '11
iMovie Trailers: Olee otú Mepụta Movie Trailers na iMovie
iMovie abịa na ọhụrụ atụmatụ nke nkiri trailers nke na-enyere gị aka ime Hollywood ka ụlọ videos na ala. Ọtụtụ ndị na-eche na-eke nkiri trailers na iMovie siri ike. N'ezie, ọ dị mfe ike a nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie. Nanị họrọ site na otu nke 15 nkiri ndebiri, mezue ihe ndepụta na-ahọrọ na obere vidiyo maka storyboard. Soro nzọụkwụ ike gị nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie.
Nzọụkwụ 1. Mepụta ọhụrụ oru ngo ma họrọ a ụgbọala na-adọkpụ template
Gaa Njikwa> New Project na-amalite a ọhụrụ oru ngo. Na Project Gburugburu window, họrọ a nkiri ụgbọala na-adọkpụ isiokwu. Ịnwere ike ihuchalu isiokwu na nri site abụọ-pịa ya. Ebe i nwere ike hazie ụgbọala na-adọkpụ oru ngo aha, setịpụrụ akụkụ ruru na etiti ọnụego nke nkiri ụgbọala na-adọkpụ isiokwu.
A mkpirikpi Ama nke nkiri ụgbọala na-adọkpụ template na otú ọtụtụ nkedo so Ọ na atụmatụ egosi n'okpuru onye nkiri, nke nwere ike inyere gị aka ikpebi nke nkiri ụgbọala na-adọkpụ template iji.
Mgbe ntọala, kụrụ "Mepụta" na-amalite ike a nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie.
Nzọụkwụ 2. Complete nkiri ụgbọala na-adọkpụ ndepụta na iMovie
Wet ke ọmụma, dị ka nkiri aha, ụbọchị, wdg na iMovie ndepụta taabụ. Dị pịa ẹdude aha ma ọ bụ okwu na pịnyere ọhụrụ ederede ịgbakwunye gị ozi. Biko jide n'aka dịghị blanks na-ekpe. Ị kwesịrị ị na jupụta na ihe ọmụma nile n'ihi iMovie incorporates ihe ị pịnyere ke ubi n'ime ụgbọala na-adọkpụ.
Nzọụkwụ 3. Dọrọ na obere vidiyo na storyboard
Pịa storyboard ịgbakwunye gị video na ederede. Dọrọ na dobe gị na obere vidiyo si Omume nchọgharị na na placeholders na-eme ka a nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie. Ị nwere ike dochie placeholder ederede na gị onwe gị na-amasị gị. Dị nnọọ pịa ya na pịnyere gị onwe gị ederede n'elu ya.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ị na-ama dị fim n'ime iMovie, ị nwere ike họrọ ya na Omume Library. Ọ bụrụ na ị kwukwara videos ka iMovie ma, na-aga Njikwa> Bubata> Bubata Movies Ibu Ibu nkiri na iMovie. Ma i nwere ike ịhụ ụfọdụ video formats ka anaghị akwado na iMovie ebe iMovie nanị na-akwado ụfọdụ MP4, MOV na M4V faịlụ, na ị ga-mkpa a Mac Video Ntụgharị iji tọghata videos ka iMovie akwado videos mbụ.
Nzọụkwụ 4. Mee ogbugba ndepụta
Ugbu a, gaa Shot List taabụ. Ịdọrọ na obere vidiyo na ị chọrọ-gụnyere gị nkiri ụgbọala na-adọkpụ na placeholder. iMovie ga-akpaghị aka ịtọ gị mkpachị ziri ezi na size dabara na ụgbọala na-adọkpụ.
Nzọụkwụ 5. Watch na ịkọrọ gị nkiri ụgbọala na-adọkpụ
Pịa otu n'ime play buttons na elu nri akuku nke Project nchọgharị. Full ihuenyo preview bụ dịnụ.
Mgbe ị na-nwere afọ ojuju na gị nkiri ụgbọala na-adọkpụ, ị nwere ike mmepụta bụ ma ọ bụ òkè YouTube, MobileMe, Vimeo, Facebook, CNN, wdg kpọmkwem ịkọrọ ezi vidiyo na ndị ọzọ ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ma ọ bụ ịzọpụta oru ngo gị Mac ikiri na gị obere ngwaọrụ.
> Resource> iMovie> Olee otú Mepụta Movie Trailers na iMovie